कन्डम च्यालेन्ज ! हाँसेरै मर्नुहुन्छ (एकपटक अवस्य हेर्नुहोस्)
Home/स्वास्थ्य जिवनशैली/कन्डम च्यालेन्ज ! हाँसेरै मर्नुहुन्छ (एकपटक अवस्य हेर्नुहोस्)
भिडियो अन्त्यमा छ । है ।
गर्भ रहनबाट जोगाउने मात्र होइन यौनजन्य रोगबाट समेत जोगाउछ कन्दमले । तर यसको प्रयोग गर्दा पनि कतिपयको अनिच्छित गर्भ बसेको पाइएको छ । यो प्रयोग गर्न नजान्दाको परिणाम हो ।
धेरैजसोलाई कन्डमलाई उपयोगको समय प्रभावकारी हुने गरी कसरी सुरक्षित राख्ने वा त्यसको सही प्रयोग गर्ने कसरी भन्नेबारे खासै थाहा हुन्न । कन्डमको प्याकेट च्यात्नुभन्दा अघि यो पूरा टाँसिएको छ कि छैन भन्ने हेर्नपर्छ । टाँसिनुको मतलब बिगि्रनु हो । एक्स्पायरी डेट पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
यसलाई अतिरिक्त प्रकाश, गर्मी आदिबाट जोगाउनुपर्छ । कन्डमलाइ चिसो र अँध्यारो स्थानमा राख्नुपर्छ । उपयोगभन्दा पहिले प्याकेटबाट निकाल्नुहुन्न ।
सुगन्धित (फ्लेभर्ड) कन्डम पनि जताततै पाइन्छ । चकलेट, स्ट्रबेरी, मिन्ट, केरा आदिको सुगन्धयुक्त कन्डम पाइन्छ । कन्डम चिप्लो बनाउन नरिवल वा अन्य तेल, भेसलिन आदि घरमा उपयोग गरिने चिल्लो, मेचीकालि खबर वस्तु व्यवहारमा ल्याउनु हुँदैन । यसो गरे कन्डम च्यातिन्छ । पोखरेलका अनुसार, कनडममा सधैं पानी जस्तो सुरक्षित चिप्लो पदार्थ लगाउनुपर्छ । बरु केही पाइएन भने शुद्घ पानी उपयोग गरे हुन्छ ।
अचेल कन्डम लगाए पनि नलगाए झैं अनुभव दिलाउन अति पातला कन्डम पनि बजारमा आउन थालेका छन् । यस्ता कन्डमले यौनानन्द बढी दिए पनि च्यातिने डर बढी हुन्छ । कन्डम जति पातलो हुन्छ, सहज रूपमा प्रयोग गर्दा च्यातिने सम्भावना पनि त्यति नै बढी हुन्छ ।
मुखभित्र आउने खटिराका लागि यस्ता छन् १० घरेलु उपचार
आखिर युवतीहरु किन मन पराउँँछन् भान्टा ? पूरा पढ्नु होस ।।
म २७ बर्षिया महिला मेरो श्रीमानको यौन शक्ति धेरै कम छ, बढाउनको लागि के गर्ने होला ?
श्रीमानले यौनसम्बन्ध दैनिक दुई पटकसम्म भने पछि..! के दैनिक दुई पटक सम्बन्ध राख्नु साधारण हो ?